I Stuart Wilson: “Manohana ny fizahantany ny Amerikanina” | NewsMada
I Stuart Wilson: “Manohana ny fizahantany ny Amerikanina”
Par Taratra sur 30/06/2018
Nanisy teny momba ny fizahantany eto Madagasikara ny mpiandraiki-draharahan’ny masoivoho amerikanina, i Stuart Wilson. Ny hampandroso ny toekarena malagasy aloha no mahatonga azy ireo eto, ary ao anatin’izany ny fampiroboroboana ny fizahantany. “Manan-karena amin’ny rehetra i Madagasikara eo amin’ny zavaboaharyy, tokana maneran-tany mihitsy aza ny maro, ny hita any morontsiraka, ny any Tsingy, ny any Isalo, sy ireo biby samihafa, toy ny gidro. Hahazoana mampandroso ny fizahantany eto Madagasikara ireo rehetra ireo”, hoy i Stuart Wilson.
Manohana mivantana na tsy mivantana ny fitodihana aty Madagasikara ny masoivoho amerikanina, amin’ny alalan’ny USAID, mamatsy ny tetikasa Fiarovana sy vondron’olona manohana ny voajanahary rehetra mampiavaka an’i Madagasikara, hisian’ny fampandrosoana maharitra. Koa misy ny tetikasa Hay Tao manampy amin’ny fitaovana hoenti-miasa any amin’ny faritra rehetra. Eo koa ny tetikasa Mikajy, araka izany anarany izany, hanaovana ezaka hampihena ny loza manapotika ny tontolo iainana. Miara-miasa amin’ny minisiteran’ny Fizahantany ny masoivoho amerikanina amin’ireo tetikasa ireo.
Efa nisy mpisehatra amina fizahantany niantohan’ny Amerikanina nanangom-baovao izay tsara ho fantatra momba izany tany Etazonia, hisarihana ny vahiny ho avy eto Madagasikara. Nifanakalo hevitra tamin-dry zareo matihanina amerikanina ny Malagasy nandritra izany fotoana izany.
Hatramin’ny 2002, efa namatsy vola ho fiarovana ny tranom-bakoka malagasy ny Amerikanina, toy ny Rovan’Ilafy, ny lapan’Andafiavaratra, ny famerenana ny varavarana vita sokitra karana sy arabo any Marovoay sy Mahajanga, ny fanatsarana ny tanànan’i Fianarantsoa, fitazonana ireo dihy nentin-drazana, sns.
Efa nitondra 7 % amin’ny harinkarena faobe ny fizahantany, saingy olana tato ho ato ny tsy fandriampahalemana. Anarivony ireo olona nanafoana ny diany ho aty Madagasikara, noho izay tsy fandriampahalemana izay. Rahoviana ihany vao hilamina ny tany ?